I Benîno na Beninto ny Repoblikan'i Benîno dia firenena ao Afrika Andrefana, izay manana velaran-tany mirefy 114 764 km2 sady manana halava mirefy 700 km, avy any amin'ny renirano Niger ao avaratra mankany amin'ny morontsiraka atlantika any atsimo. Amin'ny teny iôroba dia atao hoe Orílɛ̀-èdè Olómìnira ilɛ̀ Benin izy, fa amin'ny teny gongbe kosa dia Beninto. Misy mponina miisa 10 741 458 ny ao Benîno tamin'ny taona 2016. Ny renivohi-pitondran'i Benîno dia i Porto-Novo (izay ataon'ny foko gona hoe Xogbonou fa ataon'ny foko iôroba hoe Adjatchè). Renivohitra ara-toekarena i Cotonou.
Nahazo ny fahaleovantenany feno i Benîno tamin'ny 01 Aogositra 1960, izay nantsoina hoe Repoblikan'i Dahomey. Tamin'ny taona 1972 i Mathieu Kérékou nandray ny fahefana hitondra ny firenena ka nanova ny anarany hoe Repoblilka entim-bahoak'i Benîno. Tamin'ny taona 1990 dia nisedra fahasahiranana ara-toekarena i Benîno ka nanova lalàm-panorenana sy niova anarana hoe Repoblikan'i Benîno.
Mikambana ao amin'ny Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO) i Benîna sady mpifanila vodirindrina aminy i Tôgô ao andrefana, i Nijeria ao atsinana, i Nijera ao avaratra antsinanana ary i Borkina Fasô ao avaratra andrefana. Ny fiteny frantsay no fiteny ofisialin'i Benîno ary ny farantsa CFA no vola ampiasainy. Mpikambana ao amin'ny Organisation internationale de la francophonie (OIF) i Benîno.
Hatramin'ny naharava ny Repoblika entim-bahoaka dia isan'ny firenena afrikana atsimon'i Sahara anjakan'ny demokrasia i Benîno sady isan'ny firenan'i Afrika manana andrim-panjakana marin-toerana indrindra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Benîno&oldid=979461"
Voaova farany tamin'ny 11 Janoary 2020 amin'ny 12:09 ity pejy ity.